QABAMUU FI AJJEEFAMUU HOGGANTOOTA ADDA BILISUMMAA UUMMATA TIGRAAY (ABUT) – Ayyaantuu Online
Berhanu Hundee Irraa | Amajjii 21, 2021
Barreeffamni kun waan dheeraa ta’eef, akka dubbistoota hin nuffisneef, kutaa afuritti addaan baasee akkan dhiyeessu dursee dubbistoota beeksisuun barbaada. Isaanis matadureelee xixiqqoo (sub-topics) armaan gadii kanaan dhiyaatu.
Xumurarrtti barreeffama guutuu PDFn dhiyeessuun yaala.
ABUT saba Tigraayif akka ABO saba Oromoo yoo ta’u; hoggantootni isaa immoo gootota saba kanaa ti.